Afrikana ve ny Afrikanera? Lasan’ny mpanankarena hatrany ny tany mahafinaritra sy torohay hafa avy ao Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2019 3:49 GMT
Jonty ao amin'ny The Fishbowl maneho hevitra momba ny zava-nisy tamin'ny fanadihadiana vaovao iray mampiseho fa niaina “fiovàna goavana indrindra amin'ny fomba fijery ara-politika” eo amin'ny vondrona rehetra ny Afrikanera hatramin'ny fifidianana tamin'ny taona 1994.
Daan ao amin'ny In my Nes mitondra ny adihevitra mitohy hoe mety ho Afrikana ve ny fotsy hoditra sy ny Afrikaner.
Bilal's Blog manamarika ny fahabetsahan'ny tany fanaovana golfa an'olona manokana ao Afrika Atsimo, ary maneho hevitra fa toy ny any amin'ny firenena kapitalista hafa, ny manan-karena ihany no afaka mandoa vola hahita ny sasany amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra ao amin'ny firenena.
Vas Lube manontany ny politikan'ny raharaham-bahinin'i Afrika Atsimo mikendry hanamafy ny fifamatorana amin'i Iran.
Iray amin'ireo tranga goavana notaterina tao amin'ny haino aman-jery tamin'ity herinandro ity ny fanambadian'ny pelaka ao Afrika Atsimo lasa ara-dalàna- na dia mbola mila miandry iray taona hafa aza ny pelaka satria mbola hahitsy ny lalàm-panorenana mba hampidirana izany. Moral Fiber mampitaha ny toe-draharaha Afrikana Tatsimo amin'i Kamerona izay tsy ara-dalàna sy azo saziana hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina ny fahapelahana.